Xildhibaan Dalxa oo beeniyay in ay xukuumadda faragellin ku heyso doorashada guddoonka baarlamaanka – Kalfadhi
Xildhibaan Dalxa oo beeniyay in ay xukuumadda faragellin ku heyso doorashada guddoonka baarlamaanka
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku heyso doorashada guddoonka golaha shacabka ee dhaceysa 30-ka bishan Abriil.
Prof. Dalxa oo wareysi gaar ah siiyay idaacada Shabeelle ayaa wararkasi ku tilmaamay kuwa been abuur iyo meel ka dhac ah.
‘’ Weli ma arkin xildhibaan lagu yiri codkaga shaqsi ma ugu codeyn kartid. ‘’ Xildhibaanka waxa uu u codeyn karaa cidda uu doonno,waxa uu sido kale codkiisa u diiddi karaa cidda uu doonayo ama wuu ka aamusi karaa.’’
Xildhibaan Dalxa oo kamid ahaa xildhibaannadii taageersanaa mooshinkii laga keennay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed sheikh Cusmaan (Jawaari) ayaa xukuumadda ka difaacay eedeymo la xiriira faragelin ay ku heyso doorashada golaha.
Doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ku tartamayan xildhibaanno badan waxay toddobaadka dambe ka dhaceysa xarunta golaha ee magaalada Muqdisho.
Guddiga doorashada golaha shacabka oo maanta billaabaya diiwangelinta musharrixiinta xilka afhayeenka baarlamaanka
Maxaa suurageliyay in dowladdu $42 M ku soo xareyso muddo 3 bilood ah ?